Umbuzo we-Acoustic Insulation
Yisebenzise kwakhona loo mbandela
TSG Abafakiweyo abavunyiweyo
Ukupapashwa kophahla kuphahla lweeNkqubo zeSoftware Roof
Ndwendwela iBhlog Yethu yokuhlaziya malunga nokuqhubekayo
Ngokucothayo kunciphisa Ingxolo yemvula nakweyiphi na i-Metal okanye enye into eyomeleleyo yoPhahla lweSoftware
Ngaba ingxolo yemvula yingxaki kuwe?
Umonakalo we-O2 Arena owenziwe ngexesha leStorm Eunice. Amacandelo ophahla lwamalaphu ale ndawo, awayefudula esaziwa njengeMillennium Dome, adilizwa ngamandla omoya wesaqhwithi nge-18 kaFebruwari 2022.
Umbuzo omnye othi iSilent Roof Ltd ibuzwe kumgaqor isiseko
“Lukhuseleke kangakanani ukufakelwa kwe-Silent Roof kwimeko yemozulu enesaqhwithi?” Umfanekiso ongasentla ngowofakelo lwamva nje lweSilent Roof oluthathwe emva nje kwesaqhwithi u-Eunice edlule e-UK. Ufakelo kumgangatho we-10 wesakhiwo esivezwe kwizinto. Siyavuya ukunika ingxelo, njengoko ubona, akukho oku okanye naluphi na olunye ufakelo olugqityiweyo nawuphi na umonakalo ngenxa yesaqhwithi u-Eunice okanye nasiphina esinye sezivunguvungu zamva nje zika-2021-22.
Jonga iphepha lethu le-Facebook apha
Le kliphu yevidiyo ibonisa abafakeli bethu abamiselweyo beTV kunye neQela leSitudiyo, befaka uphawu olufakwe kwi-stencilled kumphezulu ogqityiweyo wofakelo lwe-Silent Roof Izitudiyo zefilimu zaseLondon.
Imifanekiso embalwa ebonisa ukufakelwa kwe-Silent Roof kwenziwa kumgangatho we-10 wesakhiwo. Ukwahluka kancinci kwimeko yesiqhelo.
Thina kuphahla oluthe Cwaka ngabo kuphela ababoneleli bempahla yethu ethe cwaka ethi icuthe ngokuphawulekayo ingxolo yemvula evela kuphahla. Sizinze kunxweme olusemazantsi e-UK, iofisi yethu ebhalisiweyo iseTorquay, Devon, UK. Senza ufakelo kwi-UK yonke ngokuxhomekeke kwimida ethile kwaye sinikezela ngezinto zethu ezizodwa kubafakeli kwihlabathi liphela. Unomdla wokuthetha nathi malunga neprojekthi yakho? Unomdla wokuthumela ngaphandle? Jonga ngakumbi ezantsi kweli phepha, okanye usitsalele umnxeba.
Umnxeba: 01803 203445 Ifowuni: 077865 76659
Ungayinqanda njani ingxolo yemvula kuphahla lwensimbi.
Thina kwindawo ethuleyo sithe saqulunqa isisombululo kwingxaki yengxolo yemvula evela kumaphahla aqinileyo angena kwindawo yokuhlala okanye yokusebenzela phantsi. Sisebenzisa isixhobo sethu seTekhnoloji yokuNcitshiswa kweMvula kwiMphezulu kumphezulu onje ngePhepha leNgxelo yeMali kunye nokunye okunjalo.
Xa sele uyifakileyo indawo engaphantsi kophahla oluphathwayo yakuba izibonelelo zisuka nje kuncitshiswa kakhulu ngongcoliseko lwengxolo yemvula. Imifanekiso ekule ndawo ingumfanekiso wendlela i-SRM isetyenziswe ngayo kwiProfayili yeMetal Roof enkulu kwiFuchi laseMonster Fall e-Southall, eLondon, ngoSeptemba 2018, zonke i-5400 ezikwere zemitha zayo.
Iprofayili yokuPhepha kweSinyithi
Iipaneli zophahla lweProfayili Metal Roaling-Ngokucutha Dlulisa Ingxolo yemvula
Kwiimeko apho ingxolo yemvula kwiprofayili yensimbi okanye izinto eziphahleni ziyachaphazela indawo yomsebenzi engezantsi zisinike umnxeba eSilent Roof,
sinesisombululo kwingxaki yakho. Ngokudibana nomenzi ohamba phambili owenza iimveliso zokufakelwa matrix ezintathu zenkqubo ye-Silent Roof System, efakwe phezu kophahla lwakho olukhoyo Ngokucacileyo iyanciphisa nengxolo yemvula ngaphambi kokuba yenzeke. Ingxolo yemvula kwezi ntlobo zezakhiwo zophahla luyinkathazo kwiindawo ezininzi ezahlukeneyo zokuphila; iiyunithi zomzi mveliso, izikolo, icandelo lokufota, iiofisi zentengiso kunye nezinye.Imifanekiso kule ndawo ingumfanekiso wendlela i-SRM isetyenziswe ngayo kwiProfayili enkulu yeMbalo yoLwakhiwo kwiRool Monster Factory Rooft eSouthall, eLondon, ngo-Sep 2018 , yonke iikhilomitha ezingama-5400 eemitha zayo.
Ukufakelwa kophahla okuSilent kugqitywa ngokukhawuleza kwaye wonke umsebenzi wofakelo lwenzeka ngaphandle kwesakhiwo ukuze ungaphazanyiswa yimisebenzi engezantsi kophahla ekuthethwa ngalo.
Intengiso yophahla ophahleni
EWE, intengiso ethulathekileyo yophahla lwophahla iyafumaneka kwimibala eyahlukeneyo. Yiba nelogo yenkampani yakho naphi na ophahleni lwophahla. Akukho pende, susa kwaye uphinde uhambise nangaliphi na ixesha. I-UV izinzile.
Ngo-2019, safikelelwa luphawu lomhlaba jikelele ngokusebenzisa inkampani yethu yokufaka eyabuza lo mbuzo, 'yeyiphi eminye imibala efumanekayo?'
Kodwa lo mbuzo awuzange ucinezelwe yingxolo yemvula kodwa wawenzelwe iinjongo zentengiso yophahla. Isiseko sombala omnye ogqunywe ngumbala ohlukileyo we logo yeenkampani.
Le projekthi ibiyizakhiwo ezili-10,000 XNUMX zeemitha ezisophahleni ezigqunywe zizakhiwo ezininzi eziphakamileyo, iqonga lentengiso elifanelekileyo.
Ukulandela iinyanga zothethathethwano kunye neenzame kwisebe le-R & D lezinto esizenzileyo eJamani, inguqulelo entsha esiyibiza ngokuba,
Umbala we-Silent Roof Material (CSRM), wazalwa.
Ngoku sebenzisa uphahla lwakho kuphahla lwentengiso kwaye ucinezele ingxolo ekhathazayo yemvula ngaxeshanye kunye nolwahluko owahlukileyo weSilent Roof.
UMBUZO: Ngaba ikhona ingxowa-mali yesicelo ESINYE KWABANYE?
Indlela yofakelo iqala ngocingo olusisiseko sombala okhethiweyo, ilogo yenkampani inqunyulwe kumaleko okhethekileyo we-CSRM kwaye ikhuselekile kumaleko wesiseko. Inkampani yethu yokufaka inokubonelela ngale nkonzo yokufaka kwihlabathi liphela. Ngaba unayo imeko enokuxhamla kolu phuhliso lutsha? Uphahla lwentengiso, intengiso Qhagamshelana nathi ngoku ngolwazi oluthe kratya.
Isebenza njani ... Ukuva ukukholelwa
Ndingawuyeka njani lo msindo wemvula ngumbuzo oqhelekileyo Awungekhe unqande imvula, kodwa u-Silent Roof uya kunciphisa kakhulu ingxolo yemvula ukuba ibe kukuhleba.
Ikliphu yevidiyo emfutshane ukuya ekhohlo ibonisa ngokucacileyo iimpembelelo zokudonsa kwamanzi kumphezulu wesinyithi.
Oku kulingisa ingxolo yemvula nangaphandle kokufumana isibonelelo sokugubungela izinto zophahla oluSilent kumhlaba onzima. KHUMBULA, nyusa umthamo wesixhobo sakho ngaphambi kokucofa iqhosha lokudlala. Yinto yesandi esibonisa umdla kunye nevidiyo.
Umzi mveliso weefilimu - Ndwendwela iBhlog yethu
Ngaba ubandakanyeka kuShishino lweeFilimu?
Ngaba ingxolo yemvula yingxaki kuwe? Sinesisombululo sendlela yokumisa ingxolo yemvula.
Uphahla lweMonster '
Ngentwasahlobo ye-2018, sifumene umbuzo obuze: -
"Molo ... Oku kunokuba yinto engaqhelekanga. Ndinayo nendawo yokugcina izinto enkulu efuna ukuba kuvakale ubungqina bemvula kwaye asinakukwazi ukufakela into ngaphakathi ukuze iindlela zokufaka eziqhelekileyo azisebenzi. Ngaba i-Matile yephahla yethu efihliweyo ingafakwa ngaphandle kophahla lwendlu yentsimbi nceda? "
Olu phando luphuculwe kulwakhiwo lokuqala lweSilent Roof olunxulumene nokurekhodwa kwesandi ngaphakathi kweFilimu. Kutshintshiwe kwathiwa 'igumbi elikhulu lokugcina iimpahla' uAA Isilwanyana ifunyenwe kwindlu yokuhlala iseti yokufota. Olu luthotho oluza kukhutshwa yi-Sky Atlantic kamva ngo-2019. Uphahla oluthe cwaka luzise isisombululo kwingxaki yengxolo yemvula evela kuphahla oluqinileyo lomhlaba. Ingxolo yemvula ingayichaphazela kakubi imisebenzi yokurekhoda yeqela lababethayo kwimidlalo esezantsi kophahla. Olu fakelo lwaluphumelele kangangokuba eminye imibuzo yaphinda yalandelwa inxulumene noMzi mveliso weFilimu. Kwangoko kwi-2019, imveliso entsha kaSam Mendes 'ka-1917' evela kwiiNdaba zeMidlalo ibandakanye iSilent Roof Ltd ukubonelela, iTekhnoloji yokuNciphisa ingxolo yeMvula kwiindawo zokufota kwindawo yaseSalisbury e-UK.
Uphahla oluthuleyo e-USA
Imveliso yeMoffett esekwe eMelika kwaye basebenzise imveliso yethu kwifilimu yabo eHouston, eTexas. Siza kubeka iliso kumava e-Moffett Productions ngenzala.
Ngaba ukwimeko efanayo? Nxibelelana nathi-Sinesisombululo Akusekho kuphazamiseka kwengxolo yemvula.
Iingcali zeTV STUDIO GROUP Ltd kubume bethutyana, ukuphuma kwe studio, unyango lwe-acoustic kunye nemveliso yemisitho kwihlabathi liphela. Iqela leTV kunye neFilimu liingcali kufakelo olungenasandi, unyango lwe-acoustic, ii-studio fit-outs, ukwakha izakhiwo ezingesosigxina kunye nolwakhiwo lwethutyana ezinje; ii-pop-up studio, iindibano zocweyo, amagumbi okutyela akude ngokwentlalo kunye nezinye izakhiwo ezincedisayo. Amava abo kunye nokuzibophelela kobuchwephesha benza Iqela leTV Studio ltd ulungelelwaniso olufanelekileyo lokufaka izinto eziThuleyo zoPhahla kwaye basebenzise ngempumelelo i-SRM kwinani leendawo zokugcina, oovimba, iTV kunye nophahla lwesitudiyo seFilimu kwaye zezona zifakiweyo ze-SRM.
Ukufakelwa kwangaphambili kwezinto ezithe cwaka zophahla kubandakanya uninzi lweemiboniso bhanyabhanya kunye nomabonwakude; 'Ngo-1917' uSam Mendes Umboniso bhanya-bhanya, iBatman eLeavesden Studios, iividiyo ezikhuselekileyo zeHS2 kunye nezinye ezininzi, Cofa apha Ukujonga ezinye iinkcukacha zokufakelwa kophahla olungathethiyo kwiziko loqeqesho i-HS2 eBrackley naseLondon Film Studios.
Uphahla oluthe cwaka-kufakelwe umatshini
Kutshanje samkele ufakelo olungumatshini
Inkqubo apho ubude bebubanzi okanye ukusebenza kubude buyi-
khupha. Umfanekiso osekunene yayisisigqubuthelo sethutyana esesiphala
isetyenziselwe ukufakwa kwifilimu ye-Sam Mendes WW1 epic '1917'.
Isixhobo esikhethekileyo esigqobhoza lula ngokuwa kwemvula kwi-top egudileyo, amanzi emvula ke adlula kwiitayile, emva koko aqhubekele kumphezulu wophahla aze aye kwinkqubo yokuhambisa amanzi emvula.
Izinto eziSilent Roof zizinzile ze-UV izinza. Ngenxa yeepropathi eziguqukayo zento ingasetyenziswa kuwo nawuphi na umhlaba nokuba ithe tyaba okanye igobile. Siphuhlise iindlela ezahlukeneyo zokugcina isixhobo eso kwiindawo ezahlukeneyo.
Ingxolo yemvula idluliselwa kuthi ngendlela yamaza esandi. Ngexesha lokuwa kwemvula iintlobo ezahlukeneyo zokuhamba ezinxulumene nefuthe lamathontsi emvula kumphezulu wophahla ziveliswa. Ubume bophahla obukhoyo buza kusebenza njengesixhobo sokuthintela isandi kwindawo ethile kodwa mhlawumbi ulawulo lwengxolo yemvula aluzange lube ngumba ophambili xa kwakusakhiwa uphahla ekuthethwa ngalo. Xa ujongene nokuzama ukungavimbi uphahla ngokuchasene nengxolo yemvula, into yokuqala eya kuqwalaselwa iya kuba kukudibanisa izinto zokumamela ukulwa uluhlu lwezandi (ingxolo yemvula), evela kuphahla lwendlu. Naluphi na ulwakhiwo luya kungcangcazela kumaxesha athile, iiphaneli zophahla nokuba ziyintsimbi okanye zidityanisiwe ziya kuziphatha njengesikhumba segubu kwaye xa ifuthe liza kuvelisa isandi. Ngaba akukho sengqiqweni ke ngoko ukuba sazise izixhobo zonyango lwe-acoustic eziyilelwe ukujongana nale ngxaki yengxolo.
Indlela eqhelekileyo iya kuba kukongeza ubunzima eluphahleni. Sonke siyayazi intuitively ukuba uphahla oluqinileyo okanye udonga luya kuthintela ukusasazeka kwengxolo (amaza esandi). Ke yenza uphahla lujiye ukuze kunciphise izinga lengxolo eveliswe kukuna kwemvula, ayisiyo mpendulo icacileyo le? Owona mthetho waziwayo wokuthintela isandi nguMthetho kaMisa. Oku kuchaza ukuba ngokuphindaphinda ubunzima bomqobo we-acoustic uya kufumana malunga nokuphuculwa kwe-6dB kulungiso lwesandi. Ngamanye amagama, ukuba ubuphindaphinde ubungakanani bodonga lwezitena, umzekelo, uya kufumana malunga nokuphuculwa okungama-30 ukuya kuma-40% kwisandi esingqinelanayo. Ngokunjalo nophahla, kodwa ngoku kufuneka siqwalasele ukulayishwa okongezelelekileyo esiza kukwazisa, ngaba uphahla lunokuxhasa oku kulayishwa kongezelelekileyo kwaye ngeyiphi indleko kwaye ngawuphi umzamo?
OKANYE KUFUNEKA SIJONGE KULE NGXAKI KUPHEPHA LESIHLOKO?
Ukongezwa kwesisindo eluphahleni kuthathwa njengokulungisa ingxaki yengxolo yemvula EMVA kokuba yenzekile. Isisombululo esisinye ingaba kukuthintela ingxolo yemvula NGaphambi kokuba yenzeke? Isixhobo Esophahleni Sophahla (i-SRM) senza kanye njengoko ifakwe KUPHEPHA kophahla phezulu kophahla olukhoyo olwahlula imvula. Ngapha koko, i-SRM inobunzima obungama-800gms kwimitha yesikwere, nasiphi na isakhiwo sophahla kufuneka sikwazi ukuxhasa okongeziweyo okuncinci. Endaweni yokongeza isininzi, indlela yokuThula kweNdlela eQhelekileyo iza kusebenza njani?
Isixhobo Esophahleni Sophahla (i-SRM) yinto eyodwa eyahlukileyo athi ngokulula atyibilize imvula iwa ngamachaphaza kumphezulu othe tyaba ngaphandle kokudlulisela ingxolo yempembelelo eveliswe kumphezulu wophahla ngaphantsi. Amanzi emvula ahambahamba ngaphaya kwethambeka le-SRM emva koko athi cwaka aze aye kuphahla lwendalo kwaye aye kungena kwinkqubo yokuhambisa amanzi emvula. Uphahla oluthe cwaka luya kumisa uninzi lwengxolo yemvula nakweso nasiphi na isakhiwo sophahla ukuya kwinto yokuntywila. Izixhobo zimnyama ngombala kwaye zizinzile ze-UV. Ngenxa yeepropathi eziguqukayo zento ingasetyenziswa kuwo nawuphi na umhlaba nokuba ithe tyaba okanye igobile. Siphuhlise iindlela ezahlukeneyo zokugcina isixhobo eso kwiindawo ezahlukeneyo.
'Izinto ezizizo zePhahla leSilent yinto eguqukayo, enemilinganiselo eyahlukeneyo, eveliswa kwiifilimu zepolamide ezidityaniswe kunye apho zinqumlana khona zenza itileyi enzima, evulekileyo. Inomqolo othe tyaba kwicala elinye oveliswe kwiifaments kwisimo esingahambelaniyo, esineempawu ezimbini ezinesibophelelo sokunyaniseka kwisakhiwo esineempawu ezahlukeneyo.
Iprofayili yoKhuseleko lweZakhiwo zePali zigubungele ngokupheleleyo ngobude obungapheliyo bezinto ezimnyama eziSilent Roof, nganye ubude ikhuselwe ukuba ngummelwane kwaye ifakwe kwiziphelo. Ngenxa yolwakhiwo lwethenti evulekileyo yento leyo libonakalisa ukumelana komoya omncinci kakhulu ngenxa yoko kungafumaneki kwimeko zemozulu ezingafakwanga.
Sebenzisa kwakhona-Ipropathi eyahlukileyo
Uphahla oluthe cwaka lunokufuduswa. Ukusetyenziswa kwakhona kuyipropathi eyahlukileyo yeSilent Roof Material (SRM). Xa uthenga nasiphi isixa se-SRM, usenza ngokwazi ukuba inokufuduselwa kwisakhiwo sophahla esahlukileyo njengoko kwaye ufuna. Oku akusiyo imeko yazo zonke ezinye iindlela ezisetyenziswayo ukufumana ingxolo yemvula kwizakhiwo zophahla.
Indlela eqhelekileyo yokuzama ukunciphisa inqanaba lokungcoliseka kwengxolo EMVA kokuba yenzekile ngokongeza ungcoliseko lwengxolo (s) yomzekelo ongaphantsi komgangatho wophahla.
Isixhobo Esophahleni Esithe tyaba sisebenza kumphandle wangaphandle kophahla, sinqanda ukuwa kwemvula okunefuthe kumphezulu wophahla kangangokuba kunciphise kakhulu ingxolo yemiphumela NGaphambi kokuba yenzeke.
Emva koko unokukhetha ukukhulisa i-SRM, uyithuthe uyise kwenye indawo kwaye uyisebenzise kwaye iyipropathi yokunciphisa ingxolo kwakhona, kwaye kwakhona, kwaye kwakhona ... Ukuthenga enye, izicelo ezininzi.
Yeyiphi enye imveliso enepropathi yokusetyenziswa kwakhona ngokunxulumene nongcoliseko lwemvula? Ngokwazi kwethu, AKUKHO.
Umfanekiso osekunene kulapho iSilent Roof Material yaphinda yabekwa kwiMonster Roof eSouthall yaza yaphinda yafakelwa kwiIgnition Building eWembley, umfanekiso osekunene ngungaphambili nasemva kokuba iSilent Roof Material yayisele yenziwe. ifakwe kwisakhiwo esidala se-Ignition.
Konke oku kwenziwa kwiintsuku ze-6 ukusuka ekuqaleni ukuya ekugqibeleni.
Sisekwe kunxweme olusemazantsi eNgilane, kodwa ke unokuba neprojekthi engqondweni kwenye indawo engaphandle kwe-UK. Ukuba unemeko apho ingxolo yemvula evela kuphahla ichaphazela indawo yokusebenza okanye indawo yokuhlala engaphantsi, Sinokucwangcisa ukuthumela izinto zethu eziNqabileyo zoPhahla kwindawo yakho naphina apho inokuba khona kwihlabathi liphela.
Ukufakelwa kwento ephahliweyo yophahla lulula ngokwalo kwaye uya kukhokhelwa onke amanyathelo endlela yethu on-line okanye inkxaso yomnxeba ukuba kwaye xa kufuneka njalo.
Izinto eziNqabileyo zophahla (i-SRM) zibonelelwa ngeebhali kwimitha e-1 ububanzi ukuya kuthi ga kwi-60 yeemitha ubude. Imitha yesikwere ye-SRM yi-800g kwaye iyi-17mm ubukhulu. Iibhali zinokuhanjiswa ngaphambi kokuba kunqunyulwe nakweyiphi na ubude obuyifunayo kwiprojekthi yakho nokuba yindawo ethe tyaba, egxunyekweyo, enophahla lomgqomo.
Qhagamshelana nathi ngoku ngolwazi lwamaxabiso kunye nokuhanjiswa.
Ifowuni: 01803 203445
Iselula: 07786 576659
Zimbalwa kakhulu iinkampani esinazo okanye esisebenza nazo ngoku
Buyintoni ubunzima bezinto ezibonakalayo zeSR
Buyintoni ubunzima bofakelo oluThuleyo lweSilent? Ubunzima bezinto zokuphahla eziSilent yi-800g kuphela ngemitha yesikwere. Ayisifunxi amanzi ngenxa yoko ayiyi kugcina amanzi emvula ukongeza kulayisha kwisakhiwo esinophahla esinikiweyo.
Athini amaxabiso 'U' kunye 'R'
Ngokubhekisele kwindalo yethu yophahla ethulileyo, 'u' kunye no 'R' amaxabiso ezinto azibalulekanga xa kuthathelwa ingqalelo ukusebenzisa okuthile okuye kunciphisa kakhulu umsindo owenziwa kukuna kwemvula okunempembelelo kumphezulu wophahla. Izixhobo zeRoile ethulileyo azenzelwanga ukuba zibe yimveliso yokufakelwa kweshushu.
I-U-factor kunye ne-U-xabiso ngamagama anokutshintshwa abhekisa kumlinganiso wokufumana ubushushu okanye ilahleko ngesixhobo ngenxa yomahluko phakathi kobushushu bomoya bangaphakathi nangaphandle kwento ebonakalayo. Isiseko se-U-factor okanye i-U -xabiso ekubhekiswa kuyo njengobambiswano olupheleleyo lokuhambisa ubushushu. Ixabiso eliphantsi le-U libonisa iipropati zokugcina izinto ezingcono. Iiyunithi zeBtu / (hr) (ft2) (° F). Isixhobo seSilent Roof asiyenzelwanga ukuba ibe sisisulu ngoko ixabiso le-'U 'lexabiso alibalwa.
Ulwazi lweMveliso / iphepha leSpecies
Cofa apha ukuze ufumane ikopi ye-pdf
Kuthatha ixesha elingakanani ukufaka
Kuthatha ixesha elingakanani ukufaka uPhahla oluthe cwaka. Xa ifakiwe kulwakhiwo lweProfayile Metal Roofing (PMR) kunye nokunye okunje, i-Silent Roof Material (i-SRM) iqengqeleka phezu kophahla ukusuka kwi-eave ukuya kwi-up nangaphezulu komqolo wophahla. 'Umcu' ngamnye uya kuba yi-1m ububanzi. Umtya olandelayo ubekwe ujonge ezantsi kumgca wokuqala kwaye 'wathungelana' ngokudibeneyo usebenzisa intambo ye-PVC. Esi siqwengana emva koko sitshintshiwe ukuze silale kufutshane nommelwane kwaye inkqubo iphindaphindwe. Sebenzisa le ndlela indawo ebonakalayo yophahla inokugutyungelwa nge-SRM ngexesha elifutshane ngokwesiqhelo i-60 yeemitha zesikwere ngeyure kunye neqela lezinto zokulinganisa ezimbini ziyafana.
Ixesha lokuhanjiswa kophahla
Ixesha lokuhanjiswa kweRoile ethuleyo ukusuka kwisityalo sokuvelisa ukuya kwisiseko sethu sase-UK kuya kuthatha phakathi kwe-3 kunye neeveki ze-6 emva kokufumana iodolo yakho eqinisekisiweyo kuxhomekeke kumthwalo wangoku womsebenzi
Ixesha elilindelekileyo lobomi bePlanga eliThule
Sinezinto ezifakelweyo ezineminyaka elishumi ubudala kwaye azibonakalisi zimpawu zokwehla. Ukuncedisa ubude bexesha ukucocwa kucetyiswa ukususa ubumdaka kwimatrix.
Ungalayisha phantsi iNgxelo ye-Acoustic ye-Silent Roof Apha
(c) Onke amalungelo agciniwe ngo-2007 ukuya ku-2020 Silent Roof Ltd.
zeSITA EMF Ifom yeFayili
Enkosi ngokurhuma. Yabelana ngesixhumanisi sakho esikhethekileyo sokufumana amanqaku ukufumana amabhaso ..